Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fampitandremana momba ny homamiadana: Mety hampidi-doza ny aretim-po
Tamin'ity herinandro ity, hitan'i Amerika fa ny GERD na ny aretin'ny gastroesophageal reflux no antony nanala ny tendan'ny filoha Biden. Matetika, ny soritr'aretin'ny GERD dia tsy dia mibaribary loatra. Ary mety hampidi-doza izany.
Ny aretina reflux dia mety hitarika amin'ny Kanseran'ny Esophageal. Ny fanalana ny tenda, ny aretin-tenda, ny feo mivandravandra, ny kohaka maharitra, ny kenda rehefa mandry, na ny fikikisan'ny nify aza dia anisan'ireo soritr'aretina tsy dia fantatra loatra amin'ny GERD. Ny heartburn no soritr'aretina fantatry ny rehetra.
Ho an'ny Amerikanina maro, ireo soritr'aretina ireo ihany no fampitandremana fa mety ho voan'ny homamiadana izy ireo.
Herinandron'ny fahatsiarovan-tena GERD ity - natao hifanandrify amin'ny fahabetsahan'ny Thanksgiving. Saingy tsy mila misakafo be loatra ianao vao mahatsapa GERD sy ny loza mety aterany amin'ny fahasalamanao.
Mety tsy ho valiny ny pilina
Be loatra ny mahita ny aretim-po ho toy ny zava-misy eo amin'ny fiainana ary mampiasa fanafody tsy misy fanafody mba hanamaivanana ny soritr'aretiny. Indrisy anefa, ny fanamaivanana ny soritr'aretina dia tsy manafoana ny fahasimbana ny fiverenan'ny asidra vavony sy ny bile.
Ny fanafody dia tsy manakana ny famafazana ao anaty vavonin'ny vavony izay mety hiteraka aretina mialoha ny homamiadana antsoina hoe Barrett's Esophagus. Mitranga izany rehefa miova mitovy amin'ny vavoninao ny fonon'ny lalankaninao. Ho an'ny sasany dia miteraka fivoarana mahafaty mankany amin'ny Kanseran'ny Esophageal izany.
Aza atao tsinontsinona ny fanairana
Tsy miteraka soritr'aretina ny Barrett's Esophagus. Midika izany fa ny soritr'aretin'ny GERD dia mety ho fampitandremana tokana ho anao - ary mety ho fanalahidin'ny famonjena ny ainao!
Rehefa tratra aloha dia azo sorohina ny Kanseran'ny lalankaniny. Ny fomba fitsaboana any ivelany dia afaka manala ny tavy Barrett ary manakana ny homamiadana alohan'ny hanombohany.
Atahorana ve ianao?
Amerikanina an-tapitrisany no voan'ny Barrett's Esophagus amin'izao fotoana izao – ary tsy mahafantatra izany.
Matetika loatra, toy ny tamin'ny vadiko, ny marary voan'ny Kanseran'ny Esophageal dia tsy mahita fa manana olana izy ireo raha tsy afaka mitelina tampoka. Rehefa tonga amin'io fotoana io izy ireo dia lasa sarotra ny miaina. Olona iray amin'ny dimy voan'ny kanseran'ny lalankaniny ihany no ho velona dimy taona.
Izany dia satria mazàna tara loatra ity aretina ity ka mahalana ny fitsaboana.
Saingy azo tratrarina aloha izany – ary sorohina.
Sambany izao ny marary amerikana dia afaka mahita mora foana ny loza aterany. Ny fitelina haingana ny fitaovana EsoCheck miendrika pilina dia manome fisavana mora sy mora amin'ny lalankaniny. Ny fitsapana EsoGuard dia mampiasa ADN hanombanana ny fisian'ny Barrett's Esophagus.
Ny fitsapana dia misy any amin'ny biraon'ny dokotera sy any amin'ny foibe fitiliana any Phoenix, Las Vegas, Denver, ary Salt Lake City - miaraka amin'ny toerana maro kokoa nomanina amin'ny volana ho avy. Mianara bebe kokoa amin'ny EsoGuard.com.
Soa ihany fa ny ankamaroan'ny olona voan'ny GERD dia tsy voan'ny kansera.
Tsy aretina sahinao avela ho kisendrasendra anefa izany.
Ny fisavana no fanomezana lehibe indrindra azonao omena ireo tianao.
Anontanio fotsiny ireo fianakaviana an'arivony toa ahy fa navelan'ny Kanseran'ny Esophageal miaraka amin'ny seza foana mandritra ny fialantsasatra.
Mindy Mintz Mordecai no mpanorina ny Esophageal Cancer Action Network, Inc. (ECAN). Namoy ny vadiny noho ny Kanseran'ny Esophageal izy raha sivy sy roa ambin'ny folo taona monja ny zanany.